China 22 Gumiguru 2020
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi re PTUZ Doctor Takavafira Zhou vanoti vanasikana vanogona kusvika zviuru makumi maviri vakabata pamuviri gore rino.
Gumiguru 17, 2020
FEWSNET Inoyambira Kuti Zimbabwe Inogona Kuita Mamwe Mafashamu Akaita seCyclone Idai
Rimwe sangano rinoona nezvemamiriro ekunze nechikafu reFewsnet riri kuyambira kuti Zimbabwe inogona kuwirwa zvekare nerimwe dambudziko remafashamu emvura uye dutumupengo remhepo kana kuti cyclone mwaka uno.
VaChamisa Vobatana neVamwe Vashoma Kuviga VaMdlongwa Vakashaya neCovid-19
Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance neMugovera vakabatana nevamwe vanhu vashoma kuradzika vakambomirira Pumula Luveve mudare reparamede vari nhengo yeMDC VaEsaph Mdlongwa.
Chipatara chikuru chemuChegutu chavharwa nhasi mushure mekubatwa kwevashandi vaviri nechirwere cheCovid-19, mumwe wacho ndokufa nezuro.
Human Rights Watch Yoshushikana neMabatirwo Ari Kuitwa Vabvakure muSouth Africa
Sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica rinoti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa zvizvarwa zvisiri zvemuSouth Africa kana zvichinge zvarwara zviri munyika iyi.
Chimwe Chizvarwa cheZimbabwe Chakanga Chambovharirwa kuMusha neCovid-19 Chinodzoka muAmerica
Nekuda kwekuti nyika yakazovharwa muna Kurume wakare nekuda kwechirwere cheCovid-19 mushure mekunge hurumende yakadzika mutemo unorambidza kufambafamba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19, VaTsokodayi vakazongozvipira kugarako kusvika zvinhu zvanaka.
Rimwe sangano rinomirira vemabhizimisi muBotswana reBusiness Botswana rinoti mabhizinesi ari mudhorobha reFrancistown akatarisana nenguva yakaoma zvikuru kana hurumende yenyika iyi ikaramba yakavhara miganhu neZimbabwe neZambia.
Bazi rezvehutano rinoti neMugovera kuBulawayo kwakafa munhu mumwe chete nechirwere cheCovid-19 zvinoreva kuti varasikirwa nehupenyu nekuda kwechirwere ichi vasvika mazana maviri ane makumi matatu kana kuti 230.
Veruzhinji Vokurudzirwa Kuti Vasakanganwa Kuzvichengetedza Kubva kuCovid-19